Cup masiki muchina Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Iyo maski yekucheka ndeyemukati-yakasarudzika isina-yakarukwa jira yakagadzirwa nekupisa kupurinda, kupeta kugadzira, yekushambadzira ultrasonic, kubvisa chakavezwa, nzeve tambo bhiriji kuturika uye mamwe maitiro ekugadzira akasiyana maski ane mamwe maitiro ekusefa. Iyo maski zvishandiso haisi yemuchina mumwe chete, zvinoda Iko kushandira pamwe kwemakina michina inopedza maitiro akasiyana. Izvo zvinonyanya kuzivikanwa mask zvigadzirwa mumusika zvinosanganisira; kapu-yakagadzirwa mask yemuchina, isina-yakarukwa flat mask yemuchina, kapu-yakavezwa masiki muchina, 3M9001 / 9002 kupeta masiki muchina, duckbill mask mashini, matatu-mativi guruva mask mask,
Cup mask yemuchina is composed of a series of machines for the production of cup masks, including: cup mask forming machine, cup mask mask machine, turntable cup mask welding and slicing machine, cup mask breathing valve punching machine, cup Type mask nose line bonding machine, cup type mask ear strap spot welding machine, cup type mask monochrome printing machine, cup type mask breathing valve welding machine, etc.
Folding mukombe mask inogadzira muchina
Iyo mukombe-yakagadziriswa mask yekugadzira muchina unogona kungozvipedza zvakati wandei matanho kubva pakudya kusvika kune imwe-nguva yekugadzira, kucheka nekudzoka. Kuenzaniswa neyechinyakare bhuku rekudyisa, kudzoka uye kucheka, inogona kuchengetedza vashandi ve3-5, uye inogona kuponeswa miniti yega yega. Kugadzirwa kwemaski makumi matatu nemasere, uchishandisa PLC control system, kubata screen skrini, nyore uye nekukurumidza kushanda, kunogona kushandiswa nemunhu mumwechete, unongoda chete kudyiswa kwemanyoro uye kutora. Kunyanya kunatsiridza chigadzirwa chekugadzira.
Paramita ye otomatiki mukombe masiki kugadzira muchina:
Dzvinyiriro yemhepo: 5kg / c㎡
Saizi yemuchina: 3400 * 1230 * 1900MM
Kurema kwemuchina: 500KG
Maximum simba: 10KW;
Kushanda simba: 5KW
Speed: 30-36PCS / MIN
Iyo kapu-yakagadziriswa kumeso mask mask yemuchina inonzi zvakare slicer. Iyo inonyanya kushandisa nheyo dzekucheka kweye ultrasonic uye otomatiki kukwenya uye kusimbisa mucherechedzo kupedzisa yakasarudzika-yakatemwa kucheka uye kutonhora kwemadimbu. Muchina uyu unogadzirisa zvikanganiso zvechinyakare machira emuchina, sekusarongeka pakumisikidza, isina kukwana saizi control, kushoma kugadzirwa kwekugadzirwa uye mutengo wepamusoro wevashandi. Iyo inosanganisa maitiro mazhinji akadai sokusaverengera, kudhirowa kudhonza, kutemha tsvina, kupatsanura zvigadzirwa, uko kunobatsira zvakanyanya kugadzirwa kwekugadzira, kuderedza mutengo wekugadzira, uye kunoita kuti zvigadzirwa zviwedzere kuwanda, kuve yakagadzikana pamhando uye nekunaka pakubata.
Otomatiki mukombe mask mask yemuchina parameter:
Magetsi anopa magetsi: 220V, 50 / 60HZ
Saizi yemuchina: 840x630x1430mm
Disferging yemhando size: 1550x620x1510mm
Dzvinyiriro yemhepo: 6Kg / cm
Zvinobuda: 50-60pcs / min
Zvimiro zve otomatiki mukombe wemasiki mask:
1. Kuverenga otomatiki, inoshanda kutonga kwekubudirira kwekugadzira uye chirongwa chekugadzira.
2. Frequency kutendeuka kudzora, gadzirisa michina kumhanya mhanyisa maererano nezvinodiwa chaizvo.
3. Rinotenderera kudzora bhokisi, gadzirisa kutungamira kwebhokisi rekutonga maererano nezvinodiwa nevatengi.
5. Dhonza pombi mune izvo zvinhu uye nzvimbo zvakanyatso, izvo zvinokwanisa kudzora hupamhi hwezvinhu zvakasviba kusvika padiki uye uchengetedze mitengo.
6. Hurefu uye hukuru hwechigadzirwa chakapera chinodzorwa zvakafanana nekutsauka kwe ± 1mm, inonyatso kutonga kureba kwechigadzirwa chakapera, kuti zvimedu zvisangane nezvinodiwa pakugadzira uye kubvisa marara.
7. Yakasarudzika yekudyara rack, iri nyore kutora uye kuisirwa uye nekugadzirisa zvinhu zvisvinu.
Turntable mukombe mask masheji uye slicing muchina
Turntable mukombe-wakaumbwa masasi fusion kumucheto punching muchina inonyanya kushandisa ultrasonic welding uye otomatiki kumisikidza chisimbiso kuti apedze iyo yekutengerisa uye yekupinza maitiro emukombe-wakavezwa mask mashure. Muchina uyu unogadzira mushe musanganiswa weiyo miviri yakasarudzika mashizha emukombe-wakaumbwa masasi fusing uye punching. Iyo yakawanda-chiteshi turntable inoshongedzwa neyekucheka mudziyo wekutambisa. Iyo misoro miviri yekutakurisa uye yekucheka basa panguva imwechete. Iyo PLC control system inoshandiswa. , Kubata screen screen, nyore uye nyore kushanda, inogona kushandiswa nemunhu mumwe uye muchina mumwechete, inongoda vashandi kusunungura uye kutora zvinhu, izvo zvinogona kuponesa zvakanyanya vashandi uye kuita kuti kugadzirwa kwemukombe masiki kuve nyore uye nekukurumidza.
Zvimiro zveanotenderera disc mukombe masiki welding uye slicing muchina:
1. otomatiki akamisikidza mudziyo, muchina unogadzirisa wega nhanho, iyo inorerutsa kwazvo kushandiswa kwekuoma uye kuve nechokwadi chekukanganisa.
2. Multi-chiteshi turntable dhizaini, yakachengeteka mashandiro, inogona kwazvo kuderedza kuitika kweindasitiri tsaona.
3.Kunyungudutsa uye kudhirowa kunoitwa pamushini mumwe chete, kumisikidza kwakanyatsojeka, kugadzirwa kwemaski kunowedzera kunge yunifomu, uye kutaridzika kuri kwakanyanya kunaka.
4. Gantry dhizaini, kuitira kuti iyo yose fani inokwanisa kumira nehukuru hwekubaya simba panguva yekucheka maitiro, uye kubata kwepamu kuri nani.
Rotary mukombe mhando masiki welding uye slicing muchina paramita:
Saizi yechigadzirwa: 800x1120x1750mm
Zvinobuda: 8-10 zvidimbu / min
Folding kapu yemhando mhando mask kufema vheji punching muchina
Iyo inoshandiswa pakurovera kwevheti yekufema kumucheto kwekumberi kwemaski-akavezwa mukombe. Iyo inogamuchira chinja chetsoka, chiri nyore kushanda. Ukuru hwekubaya uye mask yemasikini inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
1. Kuongorora kupinza
2. Kukurumidza kumhanya, 50-60 paminiti
3. Easy kushanda
4. Runyararo uye hapana ruzha
5. Muchina uyu wakaumbika uye hautore nzvimbo
Otomatiki Kombe Masiki Machine
Zviyero 3500 x 1500 x 1800mm
Kushanda: 20-70 / pcs
Zvimiro zve otomatiki mukombe masiki muchina:
1. Iyo advanced servo uye inogara ichidziya tembiricha dhizaini inotambirwa inodzorwa nePC chirongwa kuitira kuti zvinhu zvacho zvigozopinda, kuumbwa, kutemwa, uye kurohwa panguva imwechete, uye chirongwa chose chekugadzira chiri chaicho choga.
2. Midziyo inongoda kuve neyakakwana otomatiki kapu-yakavezwa mhino yemhino bhandi mhete yemuchina wedura, uye inogona kuburitsa zvisingaverengeki musika-yakatarisana mukombe-wakagadziriswa kapu-yakavezwa zvigadzirwa mask.
3. Izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakaenzaniswa uye mhando inosangana zvakakwana kana kudarika yevanowongorora yekune dzimwe nyika nekune dzimwe nyika. Panguva imwecheteyo, inochengetedza zvinopfuura makumi matatu% zvezvinhu pane zvakapfuura mask masimusi. Saka, mupfungwa chaiyo, kuderedzwa kwemutengo uye kugadzirisa zvakanaka kwawana!
Mukombe mhando mask masheji matanda gango welding muchina
Dzvinyiriro yemhepo: 3kg / CM
Saizi yemuchina: 800 * 600 * 1400MM
Kugona: 10--12 zvidimbu / min
1. Dhizaini yemuchina idiki uye inoshanduka, uye mashandiro ari nyore uye nyore.
2. Inogona kushandiswa kuturika tsoka, yemukati mhete dzekunze / tambo dzekunze dzemukombe, masiki-mukaka akaomeswa uye mamwe masks akaomeswa-akagadzirwa.
3. Mushure mekunge muviri wemasiki wapera, tambo yemhete yakaturikwa pamurume, kushanda kuri nyore, uye kusangana kwakasimba uye kwakanaka. Vashandi vane hunyanzvi vanopedzisa kuturikidza kwemaski nzeve tambo kusvika kune zvikamu gumi kusvika paminiti.
1. Ultrasonic banga welding muchina anogamuchira yepakutanga transducer, yakagadzika chigadzirwa, yakakwirira-mhando chikamu musangano, yakavimbika basa, yakazara muchina dhizaini, nyore kushanda, inonyanya kukodzera N95 masiki (mukombe-wakaumbwa masks, guruva masks, duckbill masks, kumeso pamusoro) Masks , nezvimwe.) tambo dzezeve dzakagadzirirwa kukwikwidza nzvimbo, neyakagadzirwa nekubudirira kwakanyanya, kushanda kwakapusa, mhando yakagadzika, nezvimwe .;
2. Iyo mbiri yekutungamira yekoramu dhizaini inogona kugadzirisa dambudziko rekudzokera kumashure kutemwa panguva yekucheta;
3. Iko kuvhiya kuri nyore, iyo welding nzvimbo yakasimba uye yakanaka mushure mekutambisa, uye haikuvadze iyo yacho pachayo.
Inoshandiswa kwazvo mumhando dzakasiyana-siyana dzeN95 mask mashini
Saizi yemuchina: 690 * 400 * 1295MM
Kugona: 10--15 zvidimbu / min
1. Iyo microcomputer yekutonga ine yakakwira dhigiriji yekushandisa uye nyore kushanda;
2.Iye yekudhinda sitiraki uye kumhanya kunogona kugadziriswa kuti usangane nezvinodiwa zveN95 maski akatevedzana;
3.Automatiki chiyero chekatsi kuti uve nechokwadi chekuti kudhindisa kudzvanywa kuri pakati;
4. Adopt akaunzwa kunze shaft pakati uye shaft ruoko kuti gadzira screen scraper zvinyoro nyoro;
5.Iye inomhanya inokwanisa kugadziriswa yakazvimirira, iyo iri nyore uye ichikurumidza kushandisa